Sidee loo iibin alaabtii online | Macluumaad loogu talagalay qaxootiga & enterprenuers waddanka u soo guurey | Refugee Center Online
Ma rabtaa inaad jeceshahay in ay bartaan sida loo sameeyo waxyaabaha online lacag iibinta? Baro sida loo iibiyo walax online.
Baro sida loo iibiyo walax online: Dhisidda ganacsi ah internetka ah oo aad iibin karaan waxyaabaha aad jirka waa hab fiican si ay u sameeyaan dakhli dheeraad ah. Waxaa suurto gal ah si ay u sameeyaan lacag iibinta alaabta sida dahabka handmade, dharka dhaqanka, ama waxyaabo kale oo aad naftaada ama qiimo hoose ka heli iyo iibiyo qiimo sare. dukaanka online waxaa badanaa loo yaqaan "e-commerce." Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tallaabooyinka aad qaadi karto si uu u furo ganacsi e-commerce oo waxaad ka samaysaa dakhliga qaar ka mid ah:
1. Raadi si aad fikrad oo uu sameeyo, waxa uu.
Waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay, si ay u bilaabaan soo baxay in e-commerce waa in ay fikrad gaar ah. Waxaa jira dad badan oo iibinta alaabta online, oo aad u baahan tahay si ay u sameeyaan idinkaa taagan. Is weydii, waxa aan fikrad? Sidee u gaar ah dadka kale, ama sida aan ka dhigi kara mid gaar ah? Doontaa in aad la iibiyo dharka, dahabka, ama nooca qaar ka mid ah farshaxanka? Haddii aad alaabta aad u gaar ah oo suurad wacan, dadka intooda badan u badan tahay in ay iibsan doonaan.
Hab kale si aad u hesho fikrad ganacsi-gal waa in la ogaado baahida ah in suuqa. Haddii aad awoodo inaad u samaysaa wax soo saarka ah in dadka u baahan, waxaad keeni kartaa in ay suuqa online. waxyaabaha qaarkood waa si fudud u halaabin, sidaa darteed waa in aad go'aan ka gaadho haddii aad wax soo saarka ugu fiican waa online iibin. Waxaa jira waxyaabo badan oo ah adeegyada maraakiibta waxaad isticmaali kartaa, laakiin kaliya aad u baahan doontaa inaad waxaa u hubiso in aad u samayn, qayb ka si aad u hesho wax soo saarka si ay u iibsanayaan. Waxay qaadan doontaa shaqo badan si loo dhiso ganacsi online, in sababta waa in aad samayn samaynaya waxa loo baahan yahay oo idinka mid ah si aad u sameeyeen.
2. Aad wax soo saarka.
Hadda, in aad hayso wax fikrad ah, waxa la joogaa wakhtigii si aad wax soo saarka. Hubi in aad wax soo saarka waa mid tayo weyn iyo iibinta qiimihiisu. Waa in aad ku qorshayso looks la ujeedada shirka macaamiishaadu’ baahida. Ka dhig shagaajinta design la halleeyo lillaahinimada, sidaas darteed waxaa la il-qabad si ay macaamiishaadu.
Sida loo sameeyo lacag iibinta alaabta online noqon kartaa wax adag. Mid ka mid ah wax waa mid ka mid ah sameeyo waa in la go'aamiyo haddii aad u baahan tahay in lala heshiiyo ganacsatada ama saarayaasha shaqeeyaan si aad wax soo saarka. Waxaad aan ka filan karaa in ay leeyihiin wax soo saarka ugu fiican xaq u off fiidmeerta, laakiin haddii aad sii bixinta si ay faahfaahin dareenka iyo sii wanaajinta, aad ayaa ugu danbeyn soo gabagabeyn doonaa iyadoo wax soo saarka ah in dadka diyaar u yihiin in ay bixiyaan si ay for.
3. Go'aaminta suuqa Misbaax aad.
Marka aad ka dhigto wax soo saarka, ka dibna waxa la joogaa wakhtigii si ay u aqoonsadaan kuwa aad jeclaan lahayd inaad iibiso wax soo saarka si. Halkii isku dayaya in ay suuqa ballaaran inay ka iibiyaan badeecada aad, waxaa muhiim ah in la ogaado koox yar oo dad ah kuwaas oo noqon kara macaamiisha iman kara. Sidoo kale waa in aad qabto fahamka dadka iyo danahooda, sidaa darteed waxaad heli kartaa fahamka sida wax soo saarka waxay ka caawin kartaa. Sidaas ayaad ula xiriiri karaa qiimaha badeecada aad si fiican.
4. Qeex aad brand.
Hab kale oo aad isticmaali karto si aad isu taagan yahay iyada oo qeexaysa brand gaar ah. Your brand ka dhigan tahay sida aad u rabto macaamiisha in aad aragto, iyo waxa aad kala doonaa tartamayaasha kale ee suuqa. Waxaad ka eegi kartaa magac weyn in aad jeceshahay oo arag iyo sida ay naftooda u kala dadka kale. Waxaad isticmaali kartaa ay waxyoonay laakiin habka gaarka ah ee la dhigaayo aad brand adiga kuu gaar ah. magac Great ha ma ahan oo keliya ayaa kuu sheegi waxa ay samaynayaan,, ay kuu sheegaan sababta ay u qaban, taasoo la micno waxay ku salaysan yihiin qiyamka.
Shirkadda Apple waa mid ka mid ah noocyada ugu weyn dunida oo dhan, waxay abuuri kombiyuutarada iyo iPhone, laakiin waxa kala yahay sababtoo ah waxay aaminsan in hal-abuurnimo ama fikirka duwan. Isla tagaa kuu, haddii aad ka dhigi iyo iibiyaan T-shirts, waa in aad ma ahan oo keliya sheegi macaamiishaadu aad iibiso T-shirts, laakiin waa in aad iyaga inaad sharaxdo sababta aad sii iibin. Waa inaad siiso brand name in uu yahay mid gaar ah si aad u. Intaa waxaa dheer, waa in aad la abuuro logo leh noocyada gaar ah. Mararka qaarkood maalgashiga images tilmaamay dhisi doonaa kalsoonidii aad brand.
5. Create aad dukaanka online.
Waxaa jira wax badan oo dhufto ee iyo adeegyada aad isticmaali karto si iibiyaan badeecada aad online. Halkan waxa ku jira kuwa ugu caansan. baahan tahay in aad naftaada uga saabsan arrimaha khuseeyo sharciga ilaaliyo iyo this site daboolaa qaar ka mid ah Guide Legal in E-commerce.
BigCommerce – BigCommerce waa boosteejo ah oo e-commerce keentay. Waxay leedahay software e-commerce filaayo in la suuq-geynta iyo wada hadalka la dhisay, si aad kor u qaadi kartaa adiga oo soo saarka iyo kuwo iibiyo.
Amazon – Amazon leeyahay adeegyada gadista in aad awood u siin doona in ay ka iibiyaan badeecada aad online. Waxaad iibin karaa waxyaabaha aad u maamuli amar adiga oo isticmaalaya nidaamka maamulka ay. Waxay sidoo kale leeyihiin adeegyo sida maraakiibta in aad ka faaiidaysan karaan.
Etsy – Etsy waa suuq caalami ah oo aad ka iibsan karto ama iibiyo alaabta handmade. Waxaa a si gaar ah loogu talagalay dadka hal abuurka leh sida adiga oo kale oo doonaya in ay iska iibiso gogo 'oo ay si gaar ah handcrafted.
Shopify – Shopify waa xal e-commerce oo kuu ogolaanaya in si aad dukaanka online iyo iibiyo alaabta aad. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad abaabulo iyo iibiyaan badeecada aad, aqbalaan kaararka deynta, ula socdaan oo ay ka jawaabaan amarada.
Arbacada ah – Arbacada ah waa shirkad weyn e-commerce weyn in goobaha macaamiisha si ay macaamiisha ama ganacsiga si ay u iibka ganacsiga iyada oo ay website. Sida iibiyaha ah, waad iibin kartaa kala duwan badeecadaha iyo adeegyada.
6. Joogtee xiriirka macaamiisha.
In ganacsi, aad tahay oo kaliya sidaan u guuleysata adeegga macaamiisha aad. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la dhiso kalsoonida ay ku qabaan macaamiishaadu, haddii macaamiishaadu ma aad ku kalsoon tahay, waxay kaa tegi maayo shirkada kale. maanta, macaamiisha doonayaan in waqti lagu jawaabo si ay weyddiisteen, sidaas darteed waa muhiim inaad u bixisaa dhowr kanaalayaasha isgaarsiinta halkaasi oo ay aad gaari kartid. Haddii in uu yahay email, lambarka taleefanka, ama warbaahinta bulshada.
macaamiisha intooda badan waxaa qarash ay waqti on warbaahinta bulshada, waxaa muhiim ah si ay isgaadhsiin iyo falgalaan iyaga la soo tebiyaan kuwan. Ka qabashada baahiyaha sida hab wakhti, oo weydiiso in ay jawaab-celin ku saabsan wax soo saarka. Haddii aysan rabin in aad wax soo saarka ka dib markii ay soo iibsato, si sahal ah u soo Celinayn aad wax soo saarka.
7. suuqa & iibiyaan badeecada aad.
Macaamiisha waa dhiiggoodana ee ganacsi; haddaba haddii aad rabto in aad had iyo goorba ku guulaystaan ​​ganacsi, waa in aad la dhiso xiriir adag la leh macaamiisha aad. Waxaad ku samayn kartaa adiga oo isticmaala xeelado suuq la xaqiijiyay; sida advertising, marketing online, iyo dayactirka xiriirka adiga oo isticmaalaya dhufto ee warbaahinta bulshada. Waa fikrad wanaagsan inaad khadadka isgaarsiinta furan la macaamiishaadu, si ay u ogaadaan qofka aad tahay iyo maxaad u matalaan.
maalmahan, dadka iibsato waxyaabaha ku salaysan caadifadaha, waxay iibsan sababtoo ah waxay doonayaan in ay dareemaan wax. Waxa muhiim ah in la ogaado oo la awoodo in wax looga qabto sida waxyaabaha aad ka dhigi doonaa inay dareemaan. Haddii aad qabto wax soo saarka ay ka faa'iideysan lahaa dadka kale, waa in aanay noqon oo aad ka cabsan in ay iibiyaan.
Sida loo sameeyo lacag iibinta alaabta online
Iibinta wuxuu ku saabsan yahay xidhiidhka qiimaha aad wax soo saarka si ay macaamiisha aad iman kara. inaad isku deyeyso inaad u dhigma lacagta aad wax soo saarka si ay baahiyahooda ama ay doonayaan,. Sidaa darteed, Waa in aad leedahay aqoon fiican oo ku saabsan wax soo saarka oo aad noqoto in ay ka jawaabaan wixii su'aalo ah ee ay qabaan yaabaa. Haddii aad taas samayn karo, waxaad awoodi doontaa inaad ka iibiyaan badeecada aad wax ku ool ah u noqon doonaa. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u sameeyaan qaar ka mid ah dakhliga kooxda in naftaada iyo qoyskaaga taageero u noqon doonaa.
Talooyin sida loo bilaabo ganacsi Amazon ka Supplyspy.com